Umhambisi wamanzi → Amapaki • Izikhungo zezemidlalo • Amakilabhu ezemidlalo iWarsaw
Ngabe udinga i-dispenser yamanzi, isiphuzo epaki noma esikhungweni sezemidlalo? Inkampani yaseWater Point iyanikezela abahambisa amanzi ngaphandle kwamabhodlela, abaphuzayo, Umthombo wabaholi bomhlaba embonini, esingaba ngumhambisi kuphela ePoland.
Izinga lamanzi okuphuza ahlinzekwa ngemisebenzi yamanzi libhekwa ePoland yiziteshi zokuhlanzeka kanye nezifo eziwumshayabhuqe, okuqinisekisa ukuthi amanzi afinyelela kulabo abawatholayo alungele ukusetshenziswa.
Ochwepheshe bayavuma ukuthi amadolobha amaningi ePoland angaziqhenya ngamanzi amnandi futhi anempilo. amanzi ihlanzekile, ayinakho ukungcoliswa kwamagciwane futhi inamaminerali amancane, ukuze ukwazi ukuyiphuza ungasabi.
Lolu uhlobo lwamanzi avela emithonjeni naseziphethweni zamanzi okuphuza, afanele izindawo zomphakathi, njengamapaki, amabala, izingadi, indawo yokudlala kanye namabhishi.
Ukunikeza ukufinyelela kwamanzi okuphuza amasha emadolobheni, kufanele kubhekwe ngokukhethekile ukuthi izindawo eziluhlaza, i.e. amapaki amadolobha, izinkundla zokudlala kanye nazo zonke izikhungo zemidlalo, lapho kunikezwa ukwanda komzimba kwabantu abazisebenzisayo kubangela ukwanda kwesidingo samanzi amasha. amanzi.
Izingane nentsha, ikakhulukazi ngesikhathi sokuzivocavoca kakhulu, zidinga amanzi amaningi. Ngakho-ke, ngokufaka iziphethu zamanzi okuphuza ezindaweni zokudlala zezingane, kanye nasezikhungweni zemidlalo, unganikeza amanzi wokuphuza amnandi, okuzoba ngenye indlela yeziphuzo ezingavuthiwe ezinoshukela.
Inzuzo eyengeziwe yabaphuza bangaphandle ukuthi kungenzeka ukuthi kuqedwe amabhodlela epulasitiki kanye nokubumbana kokuqonda kwendawo yabantu abasha.
Izindawo zokungcebeleka, izikwele, amapaki nezindawo zemidlalo yindawo lapho kufanele khona imithombo namanzi okuphuza amanzi, okungaqedi ukoma kwakho kuphela, kodwa futhi kuhlobise lesi sikhala.
Imithombo yokuphuza amanzi ivumela ukucwalwa kokucoceka nokuma ngokushesha, futhi ukwakheka kwesimanje kugcizelela ukubukeka kwendawo.
Kubalulekile ukufundisa izingane zisencane ukuthi amanzi avela emithonjeni naseziphethweni zamanzi okuphuza enzelwa ukuphuza kuphela futhi akufanele asetshenziselwe ukugeza izandla noma amathoyizi.
Ikakhulu ehlobo, zonke izivakashi ezihamba epaki noma abahlanganyeli bemicimbi kanye nemicimbi yezemidlalo ebanjelwa ezikhungweni zemidlalo bazolazisa iqiniso lokuthi bangaqeda kalula ukoma kwabo ngamanzi aqabulayo nanempilo, ageleza avela ku-dispenser noma entwasahlobo.
Ukufaka amadivaysi anika amandla ukusetshenziswa kwamahhala nokuhlanzeka kwamanzi okuphuza aphezulu ezikhaleni zasemadolobheni sekuya ngokuya kuthandwa, hhayi ePoland kuphela, kepha nakwamanye amazwe amaningi aseYurophu. Iziphuzo zokuphuza amanzi zilula futhi kulula ukuzisebenzisa, ngakho-ke izingane, intsha, abadala kanye nabadala bangazisebenzisa ngempumelelo noma nini lapho kudingeka. Ungaphuza amanzi ngqo, ugcwalise ibhodlela lakho lamanzi noma isitja senja ngalo.
Akusadingeki ukuthi uphathe amabhodlela amanzi njengoba kusha namanzi amasha aqabulayo. Abahambisa amanzi basiza futhi nokunakekela imvelo yemvelo ngokususa imfucuza eyeqile ekhiqizwayo.
Imithombo yokuphuza ebekwe emapaki nasezikhungweni zemidlalo iya ngokuya ithandwa kakhulu ngenxa yokusebenzisa kalula nokuhlanzeka.
5 / 5 ( 33 amavoti )
amanzi ahlanzekile emapakiamanzi ahlanzekile epakiamanzi amahhala emapakiimithombo emapakiimithombo yamanzi yokuphuzapitniki emapakiabaphuzayo emapakiophuzayo epakiamanzi ezikhungweni zemidlaloamanzi emapakiukuphuza amanzi emapakiamanzi epakiisiphethu emapakiamanzi entwasahlobo epaki